गीतकार माया मगर
“गाउँकी गोरीले” बोलको गीत लेखेर चर्चामा आएकी गीतकार माया मगर अस्ट्रेलियाकी नागरिक हुन् । भुटानमा जन्मिएर नेपालको झापा दमकमा हुर्किएकी माया मगर नेपाली गीत संगीतलाई औधि माया गर्ने गर्छिन् । आफू अस्ट्रेलियाको नागरिक भएपनि नेपाली कला, साहित्य र गीत संगीतलाई सधै माया गर्ने माया मगरको शब्द रचनामा “जामा छोटो” बोलको गीत केहि दिनमै बजारमा आउदै छ । यहि सन्दर्भमा ईन्द्र जिजीबिषाले माया मगर संग गरेको संक्षिप्त कुराकानी
तपाईको दिनचर्या कसरी बित्दैछ ?
पेट पालनको काम गर्छु, त्यति नै हो ।
डायस्पोराबाट साहित्यमा कलम चलाउन कतिको सजिलो हुन्छ ?
सजिलो त पक्कै हुन्न । निजि लाईफ हुन्छ तर आफ्नो आमाको काखबाट टाढा हुँदा नै त हो सन्तानलाई आमाको न्यास्रो लाग्ने त्यसैले यहीँ माया अनि न्यास्रोपनाले नै कलम चलाउन साथ् दिन्छ ।
बिदेशमात सबैजना व्यास्त हुन्छन् भन्छन्, तपाई कुन समयमा साहित्य सृजना गर्नुहुन्छ ?
हजुर व्यास्त नै हुन्छन् , अनि साहित्य सृजनाको लागि मुड चाहिन्छ । कहिलेकाँही सुत्नेबेला झ्वास्सा दिमागमा आयोभने लेख्ने हो, अनि कहिलेकाँही बिदाकोबेला समय मिलाएर साहित्य लेख्छु ।
साहित्य सृजनामा कहिलेदेखि लाग्नु भयो ?
लेखनमा रुचि त एसएलसी पास गरेपछि हो । तर अब यसरी हुन्न लेखेर मात्र राख्ने अनि च्यातेर फाल्ने गरियो भने त किन लेख्ने भनेर लेख्न छोडे लेख्न । फेरि साथीभाई अनि आफन्तको हौशालाले २०१७ मा चाहिँ गीति रचना बाहिर ल्याएको हुँ ।
साहित्यमा पनि विशेषत तपाई गीत लेख्नुहुन्छ, आजसम्म कतिवटा गीतको शब्द लेखिसक्नु भयो ?
सातवटा छ माया एल्बममा अरु पाँचवटाको रेकर्ड भईसक्यो । त्यो पाँच भित्रमा रहेको “जामा छोटो”को भिडियो रिलिजको क्रममा छ ।
तपाईले लेख्नुभएको गीत गाउँकी गोरीले भन्ने गीत त निक्कै हिट भयो नि । यो गीतको शब्द रचना खास कुन मोडमा सृजना गर्नुभयो ?
हजुर साह्रै खुशी छु, यति धेरै दर्शकहरुले मन पराईदिनु भयो । म एउटा नयाँ इन्ट्रीलाई हौशला दिनुभयो अरु कलम चलाउन । विशेष धन्यवात चाहिँ संगीतकार तथा गायक उत्तमजंग अनि मिठो स्वरकी धनि गायिका मेलिना बहिनीलाई दिन चाहन्छु । र गाउँकी गोरी सृजना एउटा जवान गाउँको केटी अनि उसमा आएको फिलिंगस यस्तै होला भन्ने लाग्यो र लेखि दिए, हाहाहा ।
तपाईकै शब्द रचनामा आउन लागेको गीत “जामा छोटो” भन्ने गीतको शब्द त अलिकति फरक पनको देखियो नी । यो गीतको बारेमा बताईदिनुहोस न ।
हजुर,यो “जामा छोटो” गीत चाहिँ वास्तविक घटनालाई समावेस गरेकी हुँ । टिन एजका केटाहरु जव विपरित लिंगी ( फिमेल) एक्ट्रेसन हुन्छन् नि उनीहरु मन परेको केटी वा अन्य केटीलाई जिस्काउने गर्छन् । सो यस गीतमा चाहिँ एकदम राम्री केटी अनि केटाले प्रपोज गरे टाईपको छ । यो गीतलाई गायक तथा संगीतकार सुनिल राईले कम्पोज गर्नु भएको छ भने, गायिका टिका प्रसाई र सुनिल राईकै स्वर रहेको छ । अरु गीत सुनेर थाहा पाईनै हाल्नु हुनेछ ।
प्रायजसो साहित्य लेख्नेहरु रुन्चे अनुहार भएको , एउटा झोला काधमा भिरेर हिड्नेहरु हुन्छन् भन्छन्, तर तपाई त त्यस्तो हुनुहुन्न । कमाई पनि राम्रै होला, तर पनि किन साहित्य लेखन तिर लाग्नु भएको ?
हाहाहा, त्यस्तो हुन्छन् र ? मलाई थाहा छैन र मेरो अनुसार कमाई, काम भनेको क्षणिक हो । आज छ भोलि छैन । कृति लेखन त पुस्तौ पुस्ता रहन्छ नि त, त्यसैले ।
तपाईको बाल्यकाल तिर फर्कौं, तपाईको बाल्यकाल कहाँ र कसरि बित्यो ?
हजुर,बोलेर अन्तर्वार्ता दिन पाएको भए मजा हुन्थ्यो । म झापामा हुर्के, साह्रै दुखमा हुर्किएकी हुँ । पछि नेपाल आएकोबेला राम्ररी कुरा गरौंला है ?
अब भविष्यको योजनाहरु के-के छन् ?
यहीँ क्षेत्रमा निरन्तरता दिने हो । गीतहरु धेरै छन् भिडियोको स्थगीत रहेका सो गीतहरुको भिडियो विस्तारै दर्शक सामु ल्याउने बिचारमा छु ।
अन्त्यमा पाठकहरुलाई केहि भन्नु हुन्छ की ?
हजुरहरु सम्पूर्णमा म मायाको नमस्कार अनि माया एल्बममा रहेको गीत गाउँकी गोरीलाई यतिधेरै माया गरिदिनु भएकोमा मुरीका मुरी धन्यवाद । भविष्यमा पनि यसरी नै माया र हौशला पाईराख्ने आशामा छुँ । आउदै गरेको जामा छोटो गीतलाई पनि उतिकै माया गर्नुहुन्छ भन्ने आशामा छुँ ।
क्यान्सरपीडितलाई मनोसामाजिक परामर्श आवश्यक : डा. रिसभ कोइराला
“धेरै चोटि आँखा जुध्यो” कभर गीतबाट शुभद्राको डेब्यु